Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Airlines » New Northern Pacific Airways waxay yeelan doontaa muuqaal Alaska
Naqshadaynta hal-abuurka leh ayaa si feker leh loo habeeyey si ay u muujiso quruxda dabiiciga ah ee cidlada Alaskan.
Bishii Janaayo 18, 2022, Northern Pacific Airways waxay soo bandhigtay nashqada cusub ee diyaaradii ugu horeysay ee martida ka soo qaybgalaysa xaflada daah-furka ee San Bernardino, California, oo ku taal hangarka Adeegyada Duullimaadka ee Shahaadiga ah (CAS.). Adeegyada Duulimaadka ee Shahaadaysan LLC waa MRO ka mas'uul ah fulinta rinjiyeynta beerka.
Naqshadda hal-abuurka leh ayaa si feker leh loo habeeyey si ay u muujiso quruxda dabiiciga ah ee cidlada Alaskan. Midab madow oo cajiib ah iyo codad cawlan oo jilicsan ayaa astaan ​​u ah dhulka buuraleyda ah ee gobolka, barafka, iyo barafka. Naqshadeynta beerka waxaa ka mid ah qaabka xarafka "N" kaas oo ku fadhiya calaamadda Waqooyiga Baasifigga. Muraayaddu waxay leedahay daawaynta waji-xidhka madow ee geesinimada leh oo soo jiidanaysa. Garabka diyaaraddu waxay la soo boodaan turquoise fiiqan, oo la socda dhexdhexaadiyeyaasha si ay u matalaan iftiinka Waqooyi ee xiisaha leh. Dhameystirka aragtida guud, dabada waxay martigelineysaa xarriiq firfircoon oo xarrago leh oo ku maroojinaysa dabeecad dabiici ah, oo la jaanqaadaysa dabada jet-madow ee indhaha soo jiidata.
"Naqshadda beerka waxay si taxadar leh u qabataa sumadda Waqooyiga Baasifigga iyo jacaylka aan u qabno gurigeena Alaskan," ayuu yiri Rob McKinney, maamulaha guud. Northern Pacific Airways. "Naqshadu waxay ku nuuxnuuxsanaysaa qiyamka shirkadeena - adeegga macaamiisha oo sarreeya, aragti la qaddariyo, iyo istiraatiijiyad waddooyin cusub oo loogu talagalay in lagu xidho rakaabka bari ilaa galbeed."
Diyaaradda rinji waa a Boeing 757-200 [lambarka dabada N627NP]. Kii ugu horreeyay ee Northern Pacific AirwaysKooxda diyaaraduhu waxay la socon doonan diyaarado isku mid ah.
HRH Amiir Maxamed bin Salmaan: TROJENA waa mid cusub oo caalami ah